မြန်မာသည် အမေရိကန်၏ "အလားအလာရှိသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်" | ဧရာဝတီ
မြန်မာသည် အမေရိကန်၏ "အလားအလာရှိသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်"
ဧရာဝတီ| November 16, 2012 | Hits:88
1 | | ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းနေပါက မြန်မာနိုင်ငံသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် “အရေးပါသော အလားအလာရှိသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်”ဖြစ်လာမည်ဟု အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ရှိ မဟာဗျူဟာ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသား လုံခြုံရေး လက်ထောက် အကြံပေး မစ္စတာ ဘန်ရုဒ်က သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုသည်။ ပထဝီအနေအထားအရ အရေးပါခြင်း၊ သဘာဝ သယံဇာတများ ပေါကြွယ်ဝခြင်း၊ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ပြည်သူလူထုများရှိခြင်းတို့ကို အမေရိကန်က အလေးထားကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးခရီးအစတွင် အမေရိကန်တို့အနေဖြင့် အားပေးကူညီရန် အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် မြစ်ကြီးနား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်
ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန့်ကျင်၍ ဖမ်းဆီးထားသူများ လွှတ်ရန် ဆန္ဒပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန် သွားရောက်
ထိုင်း နှင့် တတိယ နိုင်ငံသားများ နယ်စပ်စခန်းများမှ မြန်မာပြည် ၀င်ရောက်နိုင်
အော်ရီးဒူးနှင့် တယ်လီနော ကုမ္ပဏီအား အစိုးရမြေ ငှားရမ်းနှုန်း သတ်မှတ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Aung Kyaw Nyunt November 18, 2012 - 3:18 pm	We feel very sorry to read this message from US White House. Their remark said Myanmar has good and strategic geographical location, wealth of natural resources and possesses talented hardworking people. What else you need to makeacountry wealthy and having respectful position in the world.
If so, who had made our country to become one of the poorest countries in the world during2–3decades. They should understand themselves, change their minds and stay where they belong with dignity and sympathy to the people they had disappointed.
NLD အမတ်များအား စည်းကမ်းပိုင်း ပိုမိုတင်းကြပ်သွားမည်
တူရကီနဲ့ စစ်ရေးဆက်သွယ်မှုအားလုံး ရုရှား အဆက်ဖြတ်
Su- 24 လေယာဉ်ပစ်ချမှု ကိစ္စ ရုရှားနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ တူရကီပြော
ပါတော်မူ နှစ်၁၃၀ ပြည့် ကုန်းဘောင်မင်းအနွယ်များက သံဃာအပါး ၁၃၀ ဆွမ်းကပ်မည်
ကွန်ဒုဇ်ဆေးရုံပစ်ခတ်မှု မတော်တဆဖြစ်ရပ်ဟု အမေရိကန်ထုတ်ပြန်
ကျဆုံးသွားတဲ့ ရုရှားစစ်သည်များကို သူရဲကောင်းဆုများ ချီးမြှင့်
ဆီးရီးယားမှာ S – 400 ဒုံးပျံတွေ ရုရှားချထားမယ်
ပစ်ချခံရတဲ့ ရုရှားလေယာဉ်မှူးတဦးကို ဆီးရီးယားစစ်တပ် ကယ်တင်နိုင်ပြီ